Ny fampiasam-bola amin'ny rindranasa marketing amin'ny referral tsara ho an'ny orinasanao dia zava-dehibe ary tokony ho ampahany tsy tafiditra amin'ny paikady fitomboana rehetra. Saingy ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral dia tsy midika hoe “manankarena haingana.” Fampiasam-bola sarobidy io.
Ny fametrahana vola mankany amin'ny rindrambaiko sy ny haitao fanodinam-bola dia ny fanakarana ny asanao sy ny fampitomboana ny tombom-barotra mandritra ny fotoana maharitra. Ary, na dia misy vidiny aza izany, dia mety ho ambany noho ny noeritreretinao azy izy io.
Miaraka amin'ny lozisialy marketing amin'ny referral, tsy dia hoe ohatrinona no laninao; ny fomba andanianao azy. Te hanana zavatra mifanaraka amin'ny idealin'ny orinasanao ianao ary mahatonga ny asanao ho mora sy tsara kokoa? Tsy mila fampiasam-bola lehibe io. Tonga amin'ny fanaovana safidy tsara indrindra izany rehetra izany.
Miaraka amin'ny lisansa mitentina aiza na aiza manomboka amin'ny cents vitsivitsy ka hatramin'ny dolara an'arivony; ary ny sasany manana fandaniam-bola iraisana, ary ny hafa kosa mandoa onitra miverimberina isam-bolana, tsy dia zava-dehibe velively ny mandanjalanja ny safidy rehetra alohan'ny hampiasanao vola amin'ny rindrambaiko fanovozana referral.
Na manana fanombohana ianao na CEO amin'ny hetsika multi-conglomerate, tsy ny rehetra no mino ny fiheverana fa ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral dia mandrisika ny fitomboan'ny orinasa ary azo lazaina fa io no fampiasam-bola azo antoka indrindra amin'ny orinasa rehetra.
Vakio Martech ZoneAndininy Momba ny Factory Referral
Midika izany amin'ny farany fa manana fotoana bebe kokoa izy ireo hiasana amin'ny asa lehibe hafa toy ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa sy ny fanaovana varotra. Rehefa manana ny haitao vaovao indrindra ianao, dia hanana fomba vaovao handresena ireo orinasa hafa - na amin'ny alàlan'ny teknikan'ny marketing maoderina, rafitra matanjaka kokoa, na famokarana mirindra.
Matetika isika dia manakarama olona hanao asa mankaleo sy tsy mitombina, satria toa ny lalan'ny fanoherana kely indrindra izany. Saingy ny faharoa hanombohantsika hikaroka vahaolana momba ireo lahasa fanodinana referral ireo dia hitantsika fa ny maro amin'izy ireo dia azo alain-tahaka tsy misy vidiny. Io dia mamela ny loharanon-tsika olombelona hifantoka amin'ny lahasa marketing amin'ny referral izay tsy afaka mandeha ho azy.
Ny mpiasa marketing mahomby kokoa, izay, an-tampon'ny zavatra hafa rehetra, dia faly kokoa fa tsy asaina miasa matetika. Amin'ny alàlan'ny fividianana rindrambaiko marketing amin'ny referral marina dia ho hitanao tsy ho ela fa mandefa fanavaozana ny marketing amin'ny referral izy ireo. Matetika ny fanavaozana ny lozisialy dia entina hampandeha tsara ny serivisy, hampidirina endri-javatra vaovao ary hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa (UX).
Rehefa manapa-kevitra ny amin'izay hampiasa vola ho an'ny orinasanao ianao dia diniho izay hanampy azy hitombo haingana sy tsy tapaka. Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny lozisialy marketing referral, mampiasa vola amin'ny mety ho an'ny rindrambaiko referral marketing sy ny orinasanao manokana ianao.
Rehefa mampiasa vola amin'ny rindrambaiko fanovozana referral ianao dia manambola maharitra amin'ny orinasanao. Ny zavatra lehibe momba ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral dia ny tombontsoa mety haharitra an-taonany. Satria manatsara ny fomba fiasa sy ny fahombiazany ilay rindrambaiko ankolafy ampiasanao vola, dia mitombo ihany ny lanjany sy ny faharetany.
Na dia tsy ny sehatra teknolojia aza no sehatra marin-toerana indrindra, dia io no mitombo hatrany. Ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko izay mandrindra ny fizotran'ny orinasanao dia matetika tsy fanapahan-kevitra diso.
Fampiasam-bola amin'ny sehatry ny lozisialy Marketing referral - Mividy ao a programa rindrambaiko referral referral na SaaS dia midika hoe mametraka fototra ianao amin'ny fahombiazan'ny orinasanao. Ny vola laninao izao dia hitombo ny lanjany satria ny orinasanao dia mahazo tombony amin'ny fampiasam-bola.
Ohatra, ny fampiasam-bola ataonao mandritra ny herintaona ao anaty programa rindrambaiko fanovozana na SaaS dia mety hahazo tombony betsaka kokoa noho ny fampiasam-bola amin'ny mpiasa iray izay miasa ho an'ny orinasanao latsaky ny herintaona. Ny fihenan'ny mpiasa dia manana vola lany amin'izany. Miaraka amin'ny lozisialy marketing referral, tsy olana izany.
Raha misafidy fampidiram-bola momba ny rindrambaiko momba ny varotra referral ianao dia hamorona fifandraisana matihanina amin'ny orinasa nofidinao. Mety ho afaka hifandray sy hifandray amin'ny orinasa hafa mampiasa haitao mitovy na mitovy amin'izany koa ianao.
Miaraka amin'ny fahombiazany, ny rindranasa marketing amin'ny referral dia afaka mampitombo ny vokatra. Tena marina izany raha toa ka manatsara ny SOP misy anao ny rindrambaiko fanodinam-bola ampiasanao vola ary manome automatique ny fizotry ny orinasa sasany. Miankina amin'ny lozisialy marketing referral izay fidinao hampiasa vola, azo inoana fa hanatsara ny famokarana ny rafitrao sy ny mpiasao ianao.
Raha ny tena izy dia mividy ny fotoanan'ny mpiasa ianao ary manome fotoana bebe kokoa azy ireo hahomby amin'ny fanaovana asa vaovao.
Rehefa mampiasa ny lozisialy farany manana alalana na fahazoan-dàlana an'ny SaaS an'ny antoko fahatelo ianao hitantanana ny asanao isan'andro dia miasa miaraka am-piarovana ny orinasa. Ireo orinasan-tserasera momba ny varotra referral izay ampanjarianao ny fitokisanao dia tokony omenao lanja fatratra izany fahatokisana izany. Ny lazan'izy ireo dia miankina amin'ny fitazonana ny angon-drakitrao; ary ny tahirin-kevitr'ireo mpanjifanao azo antoka.
Fomba iray hafa fotsiny io fampiasam-bola amin'ny lozisialy marketing referral io izay misy dikany ho fanapahan-kevitra maharitra. Manitatra ny orinasanao ianao amin'ny fiarovana ny fanananao, ny hevitrao ary ny angon-drakitra mpanjifanao. Na dia toa lafo aza ny vidin'ny vokatra rindrambaiko fanondroana referral iray dia mendrika ny fampiasam-bola raha toa ka fiarovana izany. Matetika, ny fampiasam-bola amin'ny rindranasa marketing amin'ny referral dia mety hahatonga na hanimba orinasa.
Ny orinasa tsirairay dia tsy maintsy mandray fepetra mifanaraka amin'izany mba hahazoana antoka ny tsiambaratelo tahiriziny izay hotehiriziny. Ny fampiasam-bola amin'ny rafitra miaro ny angon-drakitra mpanjifa saro-pady dia tsy fomba iray hanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny fandikana data, fa mety ho fivarotana koa rehefa mampiroborobo ny orinasanao amin'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny haitao vaovao dia misy ny fotoana vaovao. Ny zava-drehetra hatreto dia milaza ny fahafaha-mitombo sy mivoatra. Marina daholo izany.
Ity misy zava-misy; ny orinasa sy ny vokatra miovaova ihany no afaka miaina ny avo sy iva amin'ny toekarena manerantany. Rehefa misafidy mandroso amin'ny volan'ny orinasanao ianao dia hahita fa tsy ho tafavoaka velona fotsiny ny orinasanao; hiroborobo izy io. Raha tsy misy fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral, tsy hahomby ny orinasanao satria tsy afaka hitombo izy io.
Na midika hoe lozisialy kely ho serivisy (SaaS) mividy handrindra ny rafitrao na hampiasa vola amin'ny fiaraha-miasa maharitra miaraka amina orinasan-tseraseran'ny marketing referral, tsy azo lavina fa tsy misy fotoana toa izao mba hametrahana ireo fanontaniana sarotra. Raha vantany vao hitanao ny alàlan'ny fampiasam-bolanao dia izao no fotoana anaovana azy.